रोबर्ट मुगाबे : क्रान्तिकारी स्वतन्त्रता सेनानी कसरी बने घृणित निरंकुश शासक ?
जिम्बाब्वेमा ३७ वर्ष शासन चलाएका रोबर्ट मुगाबेको ९५ वर्षको उमेरमा बिहीवार सिंगापुरस्थित अस्पतालमा निधन भएको छ । उनको उदय र पतनको कथा निकै रोमाञ्चक छ र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट उदाएका नेताको निरंकुशतावादी पतनको कथा नेपालको सशस्त्र क्रान्ति र क्रान्तिपछि कम्युनिस्ट नेताहरूमा आएको विचलनसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
जिम्बाब्वेलाई बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त गर्नका लागि संघर्ष गर्ने मार्क्सवादी क्रान्तिकारी नेता मुगाबेले लामो शासनकालमा देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारे अनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको घाँटी निमोठे । कुनै समयमा अफ्रिकाको अन्नभण्डार भनी चिनिने जिम्बाब्वे मुगाबेको शासनकालमा मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, भोकमरी, भ्रष्टाचार र रक्तरञ्जित संघर्षमा डुब्न बाध्य भएको थियो ।
सन् २००९ मा युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरू मुगाबेलाई भेट्न राजधानी हरारे जाँदा अद्भुत दृश्य देखेका थिए । एकजना बलिया युवक कचौरा र पानीको भाँडो चाँदीको ट्रेमा लिएर आएका थिए । उनी मुगाबेका अगाडि झुके अनि मुगाबेले ती व्यक्तिलाई पाउमा राखेर हात धोए । कुनै समयमा पश्चिमले मार्क्सवादी स्वतन्त्रता सेनानी भनी अग्घोर प्रशंसा गरेका व्यक्ति मध्यकालीन शासकको नक्कल उतार्न थालेका थिए र उनका जनताहरू चाहिँ चरम पीडामा थिए ।
मुगाबेले आफ्नो शासनकालमा भोकमरीलाई नीति बनाएका थिए र राज्यमा लुटतन्त्र मच्चाएका थिए । उनको इच्छाको सम्मान नगर्नेहरूलाई कुटपिट, बलात्कार, यातना र हत्याको शिकार बनाइने गर्थ्यो । मुगाबेको नेतृत्वमा स्वतन्त्रताको लडाईं लडेको जेडएएनयू–पीएफले राजनीतिक विपक्षीहरूलाई हिंसा र धाकधम्कीका माध्यमले दबाउने गरेको थियो । सन् २००८ मा भएको आमनिर्वाचनमा विपक्षी राजनीतिकर्मी मोर्गन स्वांगिराईले मुगाबेलाई हराउन लाग्दा उनका अनुयायीहरूलाई कुटपिट गरिएको, बेपत्ता बनाइएको अनि हत्या गरिएको थियो । मुगाबेको शासनकालमा यस्तो दुर्व्यवहार सामान्य विषय बन्न पुगेको थियो ।
मुगाबेले सत्ता सम्हाल्दा जिम्बाब्वे कृषिका लागि प्रख्यात थियो । तर मुगाबेले गोरा कृषकहरूलाई देशबाट लखेटे अनि अर्थतन्त्र डुबाए । अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि मूल्यवृद्धि यतिसम्म बढ्यो कि प्रत्येक २४ घन्टामा सामानको मूल्य बढिरहेको हुन्थ्यो । हुँदाहुँदा खर्ब रुपैयाँको नोट पनि निकाल्नुपर्ने स्थिति आएको थियो ।
आमजनता आर्थिक संकटमा पिल्सिएर रगतको आँसु पिउन बाध्य हुँदा मुगाबे चाहिँ आफ्नो जन्मदिन भव्यताका साथ मनाउने गर्थे । उनको ९१औं जन्मदिनमा उनकै उमेर बराबर तौल भएको केक काटिएको थियो । अनि उनले विदेशमा महंगा भवनहरू किनेको चर्चा पनि चल्ने गर्थ्यो ।
उनकी पत्नी ग्रेस मुगाबेले लन्डन, पेरिस र रोमका महंगा पसलहरूमा सामान किन्ने गरेकी थिइन् । गुच्ची ब्रान्डको महंगो झोला बोक्ने गरेकाले उनलाई मानिसहरू गिल्ला गरेर गुच्ची ग्रेस भनी बोलाउने गर्थे ।
मुगाबे जतनाको पीडाप्रति उदासीन शासक थिए । तर उनी ठूला विद्वान् पनि थिए । उनले सातवटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका थिए र तीमध्ये धेरैजसो डिग्री उनले कारागारमा रहँदा पूरा गरेका थिए । व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा उनी निकै कठोर परिश्रम गर्ने तथा अनुशासनमा बस्ने व्यक्ति थिए । निकै वृद्ध भएपछि पनि उनी घाम झुल्किनुअघि उठ्थे, योग गर्थे र ब्रेकफास्ट लिँदैनथिए ।
मुगाबेको बाल्यकाल एक्लोपनमा बितेको थियो । सन् १९२४ मा जन्मिएका मुगाबे आफ्ना मातापिताका ६ सन्तानमध्ये तेस्रा थिए । उनका पिता सिकर्मी थिए भने माता विद्यालय शिक्षिका थिइन् । राजधानी हरारेभन्दा ५० माइल टाढाको कुटामा गाउँमा उनी जन्मेका थिए ।
उनी १० वर्षका हुँदा उनका पिता आफूभन्दा निकै कम उमेरकी महिलासँग भागेका थिए । त्यस घटनाले मुगाबेलाई निकै चोट पुर्‍यायो । उनी पीडा भुलाउनका लागि पुस्तकको संसारमा हराउन थाले ।
उनका निकै कम साथी थिए र प्रायः एक्लै बस्न रुचाउँथे । उनलाई चिन्नेहरूले उनी सानैदेखि निरंकुश प्रवृत्तिको भएको बताउँथे ।
क्याथोलिक पादरी बन्ने सोच पालेका मुगाबे पछि शिक्षक बन्न पुगे । उनले दक्षिण अफ्रिकाको फोर्ट हेयर विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाए । त्यहाँ उदाउँदा नेताहरूले लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पाठ पढ्ने गर्थे । दक्षिण अफ्रिकाका महानतम नेता नेल्सन मण्डेला पनि मुगाबेका सहपाठी थिए । मण्डेलाकै प्रतिस्पर्धामा उनी पनि स्वतन्त्रता सेनानी बनेका हुन् भन्ने गरिन्थ्यो ।
सन् १९५८ मा अफ्रिकाभरि स्वतन्त्रता संग्राम चल्दै गर्दा मुगाबे घानामा प्राध्यापन गर्न गए । त्यहाँ उनले प्राध्यापिका स्याली हेफ्रोनलाई भेटे । हेफ्रोन नै मुगाबेको जीवनकी सबभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति बन्न पुगिन् । तीन वर्षसम्मको प्रेमसम्बन्धपछि उनीहरूले विवाह गरे । शक्तिमा पुगेपछि उनी कमरेड स्याली वा आमाइ (राष्ट्रमाता) भनी चिनिन थालिन् र उनी मुगाबेकी सबभन्दा निकटवर्ती सल्लाहकार बनिन् ।
सन् १९९२ मा मिर्गौला बिग्रिएपछि स्यालीको निधन भयो । स्यालीको साथ नपाएपछि मुगाबेमा निरंकुशतातर्फ ढल्कँदै गएको र देशलाई पनि बिस्तारै भड्खालोमा पारेको विश्लेषण धेरैले गर्छन् । स्यालीको निधनपछि मुगाबेले आफ्नी सेक्रेटरी ग्रेससँग विवाह गरे । ग्रेस आफ्ना पतिभन्दा ४० वर्ष कान्छी थिइन् ।
घानाबाट जिम्बाब्वे फर्किएपछि मुगाबेले राष्ट्रवादी दलका जोशुआ न्कोमोको छत्रछायाँमा राजनीति थाले । सन् १९६३ मा उक्त दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि मुगाबे न्कोमोबाट टाढिए अनि सशस्त्र संघर्षले मात्र गोराहरूको सरकार ढलाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसपछि उनले जिम्बाब्वे अफ्रिकन नेसनल युनियन नामक पार्टी गठन गरे ।
त्यसको एक वर्षपछि उनले जिम्बाब्वेका गोरा प्रधानमन्त्री इयन स्मिथमाथि शाब्दिक आक्रमण गरेपछि १० वर्ष हिरासत/नजरबन्दमा परे । सन् १९७४ मा हिरासतमुक्त हुँदासम्म उनले थप डिग्री हासिल गरिसकेका थिए र आफूलाई मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी भन्न थालेका थिए ।
त्यसपछि उनले सशस्त्र संघर्ष थाले । मोजाम्बिकमा छापामार लडाकू तालिम शिविर स्थापना गरेर उनले तत्कालीन रोडेसियामा आक्रमणको नेतृत्व गरे । सन् १९७९ सम्म आइपुग्दा स्वतन्त्रता युद्धमा परी ३० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको थियो । मुगाबे क्रान्तिकारी नेताका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए । त्यसै वर्षको क्रिसमसका दिन लन्डनमा एक सम्झौता भएपछि इयन स्मिथ सत्ता परित्याग गर्न बाध्य भए ।
यसरी जिम्बाब्वे स्वतन्त्र भयो । त्यसपछि मुगाबेले आफ्ना पुराना नेता न्कोमोको दललाई चुनाव लड्नै दिएनन् अनि आफूहरूले नजितेमा युद्धमा फर्किने धम्की दिए । नेपालमा पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीहरूले कांग्रेस, एमाले तथा अन्य दललाई यसरी नै चुनावप्रचार गर्नै निषेध गर्ने अनि आफूहरू हारेमा जंगल फर्कने धम्की दिएर चुनाव जितेका थिए ।
मुगाबेको दलले दुईतिहाइ बहुमतका साथ चुनाव जित्यो अनि उनले माताबेलेल्यान्डमा न्देबेले कबिला समूहका मानिसको नरसंहार गराएर विपक्षी दलको आधारइलाका नै ध्वस्त पारे । जिम्बाब्वेलाई अस्थिर बनाउन छिमेकी मुलुक दक्षिण अफ्रिकाले खेल खेलेको र आफूले त्यसो हुन नदिनका लागि हिंस्रक कारवाही गरेको बताउँदा पश्चिमी शक्तिहरूले त्यसलाई माने ।
पश्चिमी नेताहरूको आशीर्वाद पाएर अनि पत्नी स्यालीको राम्रो सल्लाहका साथ मुगाबेले जिम्बाब्वेमा अनेकौं विद्यालय र अस्पताल खोले अनि देशलाई अफ्रिकाकै सबभन्दा धेरै साक्षरता दर भएको मुलुकमध्ये एक बनाए ।
तर सन् १९९० सम्म आइपुग्दा शीतयुद्ध समाप्त भयो अनि पूँजीवादी पश्चिम र साम्यवादी सोभियत संघले प्रभाव जमाउनका लागि अल्पविकसित देशहरूलाई दिने गरेको सहायतामा कमी आउन थाल्यो । त्यसको मारमा जिम्बाब्वे पनि पर्‍यो । त्यसमाथि राम्रो सल्लाह दिने पत्नी स्यालीको मृत्यु भएपछि मुगाबे अनियन्त्रित भए ।
देशमा आर्थिक समस्या चुलिँदै जाँदा मुगाबे झनै निरंकुश भए अनि शंकालु पनि हुन थाले । सत्ता जोगाइरहनका लागि उनी जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार भए ।
जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको चाल पाएर उनले देशका गोरा कृषकहरूलाई तारो बनाउन थाले । गोराहरूले देशको आधाभन्दा बढी जमीनमा कब्जा जमाएको यथार्थलाई मद्देनजर गर्दै उनीहरूलाई लखेट्दा जनसमर्थन पाइने आकलन मुगाबेले गरे । सन् १९९७ मा उनले १५ सयजना गोराहरूलाई कुनै क्षतिपूर्ति नदिइकन जमीनमा कब्जा जमाउने आदेश दिए ।
उनको यस कदमको पश्चिमी शक्तिहरूले कडा आलोचना गर्दै आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए । त्यसपछि जिम्बाब्वेमा मुद्रास्फीति भयो र दंगा भड्किन थाल्यो । त्यसको नियन्त्रणका लागि सेना परिचालनको स्थिति आयो । त्यसमाथि कंगोमा भएको युद्धका लागि जिम्बाब्वेले १२ हजार सैनिक पठाएपछि देशको ढुकुटी रित्तियो । मूल्यवृद्धिले आकाश छोयो र देशको आधा जनसंख्या बेरोजगार भयो ।
त्यसमाथि जिम्बाब्वेको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सबभन्दा प्रमुख स्रोत सुर्तीको खेती पनि धेरै ठाउँमा हुन छोड्यो । त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई नराम्रो धक्का दियो । बेरोजगारी बढेपछि धेरै मानिस विदेशतिर पलायन भए । देशमै बस्नेहरू खाद्य सहायतामा निर्भर हुन थाले । हुँदाहुँदा जिम्बाब्वेले १० खर्ब डलरको नोट छाप्नुपर्ने स्थिति आयो । त्यसपछि उसले आफ्नो मुद्रा नै त्याग्नुपर्ने भयो ।
मुगाबेलाई चुनौती दिने मोर्गन स्वांगिराई र उनका समर्थकमाथि सरकारले चरम दमन गर्‍यो । तर विदेशी शक्तिहरूले स्वांगिराईको दलसँग साझेदारी गर्न उनलाई बाध्य बनायो । सन् २०१३ मा भएको निर्वाचनमा उनले धाँधलीपूर्ण चुनाव जिते अनि बूढ्यौलीले ग्रस्त पारे पनि सन् २०१८ मा समेत राष्ट्रपति बन्ने कुरा गरे ।
तर सन् २०१७ मा मुगाबेपत्नी ग्रेस र मुगाबेका मित्र म्नाङगग्वा गुटबीच द्वन्द्व हुँदा पत्नीलाई राष्ट्रपति बनाउन मुगाबेले म्नाङगग्वालाई उपराष्ट्रपति पदबाट बर्खास्त गरे । तर म्नाङगग्वाले सेनाको आशीर्वाद पाएका थिए अनि उनलाई बेलायत र चीनले समेत समर्थन गरेका थिए । त्यसैले उल्टो मुगाबे नै सत्ता छोड्न बाध्य बनाइए । उनको पतनमा जनताले व्यापक खुशी मनाएका थिए र यसैबाट उनी कुन हदसम्म घृणित बनिसकेका रहेछन् भन्ने देखायो ।
जिम्बाब्वेमा मुगाबेलाई स्वतन्त्रता सेनानी र निरंकुश शासक दुवै रूपमा स्मरण गरिन्छ । उनले देशलाई स्वतन्त्र बनाए तर लुटतन्त्र चलाएर खोक्रो बनाउन पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरे । स्वतन्त्रताको सुन्दर सपना देखाएका मुगाबेले अव्यवस्था, गरीबी र दमनको दुःस्वप्न देख्न जनतालाई बाध्य बनाउनु आधुनिक अफ्रिकी इतिहासको एक दुःखद अध्याय हो ।
नेकपाको स्वास्थ्य स्थिति– गम्भीर तर स्थिर !
अकूत भ्रष्टाचार गरेर हाईफाई गर्ने इन्जिनीयरविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर